रक्षक नै भक्षक: आइओएमकै प्रतिनिधिले निकालेका थिए रामजी र पंकजलाई परीक्षा हलबाट :: विवेक राई :: Setopati
रक्षक नै भक्षक: आइओएमकै प्रतिनिधिले निकालेका थिए रामजी र पंकजलाई परीक्षा हलबाट
वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कजेलमा एमबिबिएस अध्ययनरत रामजी राम र पंकज रामले चौथो वर्षको पहिलो दिनको परीक्षा दिन पाएनन्।
इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन (आइओएम) ले चाहेको भए त्यो दिन रामजी र पंकज दुबैले परीक्षा दिन पाउँथे। विडम्बना कस्तो भयो भने जुन संस्थाले उनीहरूको लागि लड्नु पर्ने हो त्यहीँका मान्छेले उनीहरूलाई परीक्षा हलबाट बाहिर निकालिदिए।
निकै अघिदेखि नै कलेजले उनीहरूलाई अतिरिक्त शुल्क बुझाएमात्र परीक्षामा सामेल गराउने दबाब दिइरहेको थियो। तर रामजी र पंकज भने अन्य शुल्क तिर्न तयार थिएनन्। कलेजले अवैध शुल्क मागेकाले कुनै पनि हालतमा उक्त शुल्क नतिर्ने उनीहरूको अडान थियो।
यसैबीचमा गत सोमबार चौथो वर्षको परीक्षा सुरू भयो। रामजी र पंकज पनि मास्क र आवश्यक सुरक्षाका सावधानी अपनाएर परीक्षा दिन हलभित्र छिरे। दुबैसँग प्रवेश पत्र थिएन तर हातमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले पठाएको पत्र बोकेका थिए।
आयोगले गत पुस २६ गते आइओएमलाई रामजी रामलाई परीक्षामा सामेल गराउने व्यवस्था गराउन पत्र पठाएको थियो। जसमा बोधार्थ नेसनल मेडिकल कजेललाई पनि गरिएको थियो।
जब उनीहरू हलभित्र परीक्षा दिनलाई छिरे, त्यहाँ खटिएका सरले उनीहरूलाई एक मिनेटमै बाहिर निकालिदिए। ती सर थिए, आइओएमले नै खटाएका यज्ञराज राई।
राईले परीक्षाबाट निस्कन भनेपछि रामजीले आयोगले नै परीक्षामा सामेल गराउनु भनेको छ भन्दै हातमा बोकेको पत्र देखाए। तर उनले पत्रलाई हेर्नै चाहेनन्। रामजीले सेतोपाटीसँग भने, 'आयोगको पत्र हामी मान्दैनौं। आयोगले भनेर हुन्छ कि क्या हो भनेर भन्नुभयो।,'
रामजीले आफ्नो समस्यालाई थप प्रष्ट्याउन खोजिरहेका थिए तर ती सरले विधि प्रकृया मिलाउनु पर्दैन भनेर रूखो जवाफ दिए। त्यसपछि रामजी र पंकज दुबै परीक्षा हलबाट बाहिर निस्किए। जुन सरले रामजी र पंकजलाई विधि र प्रकृयाबारे सिकाइरहेका थिए तिनैले विधि र प्रकृयाको उल्लंघन गरिरहेका थिए।
ती सरले रामजीले हातमा बोकेको पत्र एक पटकमात्र पढ्ने चेष्टा गरेका भए सायद दुबै जनाले परीक्षा दिन पाउँथे। किनभने पत्रमा स्पष्टसँग रामजी रामलाई परीक्षामा सामेल गराउने व्यवस्था गर्नु भनेर चिकित्सा शिक्षा आयोगले आइओएमलाई पत्र लेखेको थियो।
त्यो अवस्थामा कलेजले नै उनीहरूलाई परीक्षामा सामेल हुन नदिएको भए पनि यज्ञराज सरले त्यही पत्रको आडले कलेजलाई दबाब दिन सक्थे। कलेजले नमाने तुरुन्तै आइओएमका डिनलाई जानकारी गराउन सक्थे। त्यसो गर्दा डिनले कलेजलाई तत्काल फोन गरेर रामजी र पंकजलाई परीक्षामा बसाउन सक्थे।
यज्ञराजले त्यसो गरेनन् किनभने उनको विधि र प्रकृया अर्बौं रुपैयाँका मालिक कलेज सञ्चालकलाई लाग्दैनथ्यो। यसले हाम्रा सरकारी निकायहरू कति गैरजिम्मेवार र व्यवसायीहरूसँग उनीहरूको साँठगाँठ कस्तो छ भनेर प्रष्ट पार्छ। कलेज सञ्चालक अन्सारी नेकपा ओली समूहका नेता हुन्। २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा उनी तत्कालीन नेकपा एमालेबाट वीरगन्ज महानगरको मेयरमा चुनाव लडेका थिए।
यो घटनाबारे आइओएमका डिन डा. दिव्या सिंहलाई सोध्दा उनले भर्खर थाहा पाएको प्रतिकृया दिइन्।
'यो कुरा मलाई भर्खर थाहा भयो। यसबारे रामजी वा कसैबाट औपचारिक पत्र आओस् अनि छानबिन हुन्छ। त्यसको पनि प्रकृया छ नि त,' उनले भनिन्।
आइओएमले नै गर्दा रामजीले बाँकी परीक्षा दिन पाएको भन्दै उनले जस लिइन्। सुरूमा हामीले उनैलाई रामजीको समस्याबारे बुझ्दा आफूको क्षेत्राधिकारभित्र नपरेको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगमा बुझ्न भनिन्। हामीले आयोगले पत्र पनि पठाएको छ रे आइओएमलाई भनेर सोध्दा उनले कुनै पनि पत्र नआएको जानकारी दिइन्।
त्यसपछि आयोगका सूचना अधिकारी सेमन्तराज कोइरालालाई बुझ्दा उनले पुस २६ गते नै आइओएमलाई पत्र पठाएको बताए। लगत्तै पत्र आएको पुनः स्मरण गराएपछि डा. सिंहले पत्र आएको स्वीकारिन्। उनले आफूलाई नभएर साहयक डिनलाई पत्र प्राप्त भएको र लगत्तै रामजी रामलाई परीक्षामा सामेल गराउन निर्देशन दिएको बताइन्।
तर कलेजले भने आइओएमबाट कुनै पनि पत्र नआएको बतायो। कलेज सञ्चालक बसरूद्दीन अन्सारीले भने आइओएबाट कुनै पनि लिखित पत्र नआएको जानकारी दिए। आइओएमले कलेजलाई निर्देशन दिएको दाबी त गर्‍यो तर भोलिको परीक्षामा सामेल गरायो/गराएन भनेर त्यसको जानकारी लिएन। यदि लिएको भए आफैंले खटाएको कर्मचारीले नै रामजी राम र पंकज रामलाई परीक्षा हलबाट निकालेको थाहा पाउने थियो। र तत्काल ती कर्मचारीलाई आवश्यक कानुनको दायरामा लाउनुपर्थ्यो।
पछि परीक्षा दिन नपाएको कुरा मिडियामा आएपछि मात्र आइओएमले कलेजलाई पत्र पठाएर रामजी रामलाई परीक्षा दिन निर्देशन दियो। त्यसपछि भने रामजी र पंकज रामले बुधबारको परीक्षा र बाँकी परीक्षामा सामेल हुन पाए। तर उनीहरूको सोमबार छुटेको परीक्षा के हुन्छ भन्ने अझैं टुंगो छैन।
सरकारले २०७२ सालमा वादी, डोम, मुसहार र चमार गरी चार वटा जातीलाई पैसा तिरेर एमबिबिएस पढाउने भनेपछि रौतहटका रामजी राम र सप्तरीका पंकज राम वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेजमा भर्ना भएका थिए। हाल पाँचौं वर्षमा अध्ययनरत् छन्। सरकारी खर्चमा पढेपछि कलेजले हरेक वर्ष उनीहरूलाई अन्य शुल्क तिर्न भन्दै दबाब दिँदै आएका छन्। उनीहरूले भने होस्टल र मेस शुल्क मात्र तिर्नुपर्ने भन्दै लाग्ने सबै शुल्क तिरेको बताए।
पंकजलाई कलेजले परीक्षा दिनबाट रोकेको थियो, रामजीले आफूले पाएको सहयोगबाट तिरिदिए शुल्क
प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ १, २०७७, ०६:१५:००